1Sa 14 | Shona | STEP | zvino rimwe zuva Jonatani mwanakomana waSauro akati kujaya raibata nhumbi dzake dzokurwa nadzo, "Hendei tiyambukire kuboka ravarwi vavaFirisitia vari mhiri uko." Asi haana kuudza baba vake.
Jonatani anokunda vaFirisitia, asi Sauro anodzivisa vanhu kudya
1 zvino rimwe zuva Jonatani mwanakomana waSauro akati kujaya raibata nhumbi dzake dzokurwa nadzo, "Hendei tiyambukire kuboka ravarwi vavaFirisitia vari mhiri uko." Asi haana kuudza baba vake.
2Sauro wakanga agere pamugumo weGibhiya, pasi pomutamba wakanga uri paMigironi; wakanga ana varume vanenge mazana matanhatu naye.
3Ahija, mwanakomana waAhitubi, mukuru waIkabhodhi, mwanakomana waPinehasi, mwanakomana waEri, wakanga ari mupirisiti waJehovha paShiro, akafuka efodhi. Vanhu vakanga vasingazivi kuti Jonatani waenda.
4Zvino pakati pemipata, Jonatani paakanga achida kuyambukira napo mhiri kuboka ravarwi vavaFirisitia, pakanga paneshongwe yebwe kurutivi rumwe, neshongwe yebwezve kuno rumwe rutivi; zita reimwe rakanga riri Bhozezi, nezita reimwe Sene. 5Shongwe imwe yakanga imire kurutivi rwokumusoro pamberi paMikimashi, neimwe kurutivi rwezasi pamberi peGeba.
6Zvino Jonatani akati kujaya raibata nhumbi dzake dzokurwa nadzo, "Hendei tiyambukire kuboka ravarwi ravasina kudzingiswa ava; zvimwe Jehovha uchatibatsira, nokuti hakuna chinhu chingadzivisa Jehovha kuponesa, kunyange navazhinji kana navashoma."
7Ipapo mubati wenhumbi dzake dzokurwa nadzo akati kwaari, "Itai zvose zvamunofunga; endai henyu, ini ndinemi pamunoda kuita napo."
8Ipapo Jonatani akati, "Tarira, tichayambukira kuvarume avo, tindozviratidza kwavari. 9Kana vakati kwatiri, `Mirai kusvikira tasvika kwamuri,' ticharamba timire kwatiri, hatingakwiri kwavari.
10"Asi kana vakati, `Kwirai kuno kwatiri, tichakwira, nokuti Mwari wavaisa mumaoko edu;' ndicho chichava chiratidzo kwatiri."
11Zvino vose vari vaviri vakazviratidza kuboka ravarwi vavaFirisitia. VaFirisitia vakati, "Tarira, vaHebheru vobuda mumakomba mavakanga vakavanda." 12Varume veboka ravarwi vakapindura Jonatani nomubati wenhumbi dzake dzokurwa nadzo, vakati, "Kwirai kuno kwatiri, tikuratidzei chinhu." Jonatani akati kumubati wenhumbi dzake dzokurwa nadzo, "Kwira unditevere, nokuti Jehovha wavaisa mumaoko avaIsiraeri." 13Jonatani akakwira namaoko ake namakumbo ake, mubati wenhumbi dzake dzokurwa nadzo achimutevera; ivo vakakundwa naJonatani, nomubati wenhumbi dzake dzokurwa nadzo akamutevera achiuraya. 14Zvino pakuuraya uku kwokutanga, Jonatani nomubati wenhumbi dzake dzokurwa nadzo vakauraya varume vanenge makumi maviri pahafu yendima yomunda.
15Vanhu, vakanga vari pamisasa, napaminda, navanhu vose vakabvunda; neboka ravarwi, navaparadzi, naivo vakabvunda, nenyikawo yakadengenyeka; naizvozvo kwakanga kunokubvunda kukuru. 16Zvino nharirire dzaSauro paGibhiya kwaBhenjamini vakatarira, vakaona boka guru ravanhu richinyangarika, richipararira.
17Ipapo Sauro akati kuvanhu vaakanga anavo, "Verengai zvino, muwone kuti ndianiko usisipo kwatiri." Zvino vakati vaverenga, vakaona kuti Jonatani nomubati wenhumbi dzake dzokurwa nadzo havapo. 18Sauro akati kuna Ahija, "Uya pano neareka yaMwari." Nokuti areka yaMwari yakanga iripo pakati pavana vaIsiraeri nenguva iyo. 19Zvino Sauro wakati achataurirana nomupirisiti, bopoto rakanga riri pamisasa yavaFirisitia rikaramba richinyanya. Sauro akati kumupirisiti, "Dzosa ruoko rwako." 20Sauro navanhu vose vaakanga anavo vakaungana, vakarwa, vakawana munondo womumwe nomuwe uchirwa neshamwari yake, kukava nokutambudzika kukuru. 21NavaHebheru, vaibatsira vaFirisitia kare, vakanga vakwira navo kumisasa vaibva kunhivi dzose, naivo vakavashandukira, vakabatsira valsiraeri vakanga vana Sauro naJonatani. 22Zvino varume vose vaIsiraeri, vakanga vakawanda kunyika yamakomo yaEfuyenlu, vakati vachinzwa kuti vaFirisitia votiza naivo vakavatevera kuzorwa navo. 23Naizvozvo Jehovha akaponesa vaIsiraeri nomusi uyo; kurwa kukapfuura napaBhetiaveni.
24Zvino varume vaIsiraeri vakaziya nomusi uyo, asi Sauro wakapikira vanhu, akati, "Ani nani unodya zvokudya kusvikira madekwana, kusvikira ndatsivira vavengi vangu, ngaatukwe." Naizvozvo hakuna munhu wakaravira zvokudya.
25Zvino vanhu vose vakasvika padondo, vakawana uchi huripo pasi. 26Vanhu vakati vasvika padondo, vakawana uchi hoyerera pasi, asi hakuna munhu wakaisa ruoko rwake kumuromo wake, nokuti vanhu vakatya kupika kwaSauro. 27Asi Jonatani wakanga asina kunzwa baba vake vachiraira vanhu nokupika kwavo; naizvozvo akatambanudza muromo wetsvimbo yake, yakanga iri muruoko rwake, akainyika muzinga rouchi, akaisa ruoko rwake kumuromo wake, meso ake akasvinudzwa. 28Ipapo mumwe wavanhu akapindura, akati, "Baba vako vakaraira vanhu kwazvo nokupika vachiti, `Ani nani unodya zvokudya nhasi ngaatukwe.' " Asi vanhu vakanga vaziya.
29Zvino Jonatani akati, "Baba vangu vanetsa nyika. Chionai henyu, meso angu asvinudzwa seiko, nokuti ndaravira uchi uhwu; 30ndoda kana vanhu vakanga vatenderwa kudya zvavakanga vapamba kuvavengi vavo! Asi zvino havana kuuraya vaFirisitia vazhinji." 31Nomusi uyo vakauraya vaFirisitia kubva paMikimashi kusvikira paAjaroni; vanhu vakaziya kwazvo. 32Vanhu vakamhanyira zvakapambwa, vakatora makwai nemombe, nemhuru, vakazviurayira pasi, vanhu vakazvidya pamwechete neropa razvo. 33Zvino vakaudza Sauro, vakati, "Tarirai, vanhu vanotadzira Jehovha, nokuti vanodya pamwechete neropa." Akati, "Makaita nokusatendeka; ndikungurusirei pano ibwe guru nhasi." 34Zvino Sauro akati, "Pararirai pakati pavanhu, muti kwavari, `Mumwe nomumwe ngaauye kwandiri nenzombe yake, mumwe nomumwe negwai rake, azviurayire pano, adye murege kutadzira Jehovha muchidya pamwechete neropa. ' " Zvino vanhu vose vakauya usiku uhwo mumwe nomumwe nenzombe yake, vakadziurayirapo. 35Sauro akavakira Jehovha aritari, iyo aritari ndiyo yokutanga yaakavakira Jehovha.
36Zvino Sauro akati, "Ngatiburuke, titevere vaFirisitia usiku, tivapambare kusvikira kwoedza, tirege kusiya munhu mumwe kwavari." Ivo vakati, "Itai henyu sezvamunoda." Ipapo mupirisiti akati "Ngatiswedere kuna Mwari pano." 37Sauro akabvunza Mwari, akati, "Ndoburuka, nditevere vaFirisitia here? Muchavaisa mumaoko avaIsiraeri here?" Asi haana kumupindura musi iwoyo. 38Sauro akati, "Swederai pano, imwi vakuru vose vavanhu, muzive nokuona kuti chivi ichi chakaitwa nhasi ndecheiko?
39"Nokuti naJehovha mupenyu, iye unoponesa Isiraeri, kunyange zviri kuna Jonatani mwanakomana wangu, achafanira kufa zvirokwazvo." Asi kwakanga kusino munhu pakati pavanhu vose wakamupindura. 40Zvino akati kuvaIsiraeri vose, "imwi mirai kurutivi rumwe, neni naJonatani mwanakomana wangu tichamira kuno rumwe rutivi." Vanhu vakati kuna Sauro, "Itai henyu sezvamunoda."
41Zvino Sauro akati kuna Jehovha, Mwari waIsiraeri, "Ratidzai zvakarurama." Zvino Jonatani naSauro vakabatwa nemijenya, asi vanhu vakapukunyuka havo. 42Zvino Sauro akati kuvaIsiraeri vose, "Kandai mijenya pakati pangu naJonatani mwanakomana wangu." Jonatani akabatwa. 43Zvino Sauro akati kuna Jonatani, "Ndiudze chawaita." Jonatani akamuudza, akati, "Ndakaravira hangu zviuchi nomuromo wetsvimbo yandakanga ndakabata muruoko rwangu; zvino ndinofanira kufa hangu."
44Sauro akati, "Mwari ngaandirove, arambe achidaro, nokuti zvirokwazvo unofanira kufa, Jonatani." 45Zvino vanhu vakati kuna Sauro, "Jonatani ungafa seiko, iye wakaponesa vaIsiraeri nokuponesa kukuru uku? Haisva! NaJehovha mupenyu, ruvhudzi rumwe rwomusoro wake harungawiri pasi, nokuti wakabata pamwechete naMwari nhasi." Naizvozvo vanhu vakadzikunura Jonatani, akasafa.
46Zvino Sauro akarega kutevera vaFirisitia, vaFirisitia vakaenda kunyika yavo.
Ndudzi dzakakundwa naSauro nemhuri yake
47Zvino Sauro wakati agadzwa ushe hwaIsiraeri, akarwa navavengi vake vose kunhivi dzose, navaMoabhu, navana vaAmoni, navaEdhomu, namadzimambo eZoba, navaFirisitia; pose paakaenda wakakunda. 48Akarwa noumhare, akakunda vaAmareki, akarwira vaIsiraeri pamaoko avaivapambara.
49Zvino vanakomana vaSauro vaiva Jonatani, naIshivi, naMarikishua, namazita avanasikana vake vaviri aiti, Zita rowedangwe Merabhi, nezita romuduku Mikari. 50Zita romukadzi waSauro raiva Ahinoamu, mwanasikana waAhimaazi, nezita romutungamiriri wehondo yake raiva Abhineri, mwanakomana waNeri, babamunini vaSauro. 51Kishi ndiye waiva baba vaSauro; naNeri, baba vaAbhineri, waiva mwanakomana waAbhieri.
52Pamazuva ose aSauro vakanga vachirwa zvikuru navaFirisitia; zvino Sauro wakati kana achiona murume ane simba kana murume uno umhare, waimugarisa naye.